FJKM Ankadifotsy NY FANOMEZAM-PAHASOAVANA / Katekomena / Fampianarana / Accueil - FJKM Ankadifotsy
Mitsangàna hanohitra ny Herisetra
NY FANOMEZAM-PAHASOAVANA26/02/2016 08:23
Mahafantatra antsika ny Tompo, ka mizara ireo fanomezam-pahasoavana araka izay OHATRY NY FINOANA (fatram-pinoana = « mesure de foi ») nomeny antsika. Nozarainy ho enti-MIASA (manompo) ireo fanomezam-pahasoavana ireo. Anjarantsika tsirairay izay nahazo izany kosa ny « MIKOLO » mba hitomboan’ny Finoantsika.
(I Korintiana 12 ; 13 ; 14. Romana 12.3-8)
Ny batisa ataon’ny Tompo no anomezany ny Fanahy Masina ho antsika. Ary io Fanahy Masina io no mizara fanomezam-pahasoavana ho antsika araka ny « FATRAM-PINOANA » (mesure de Foi) ananantsika tsirairay.
Ary satria tsy mitovy Fatram-pinoana ny olona dia tsy MITOVY toy izany koa ny « fanomezam-pahasoavana » ananany.
Hoy ny Apostoly Paoly : « Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana », fa ny Fanahy dia IRAY ihany.
Ny I Korintiana 12 amelabelarany ny momba izany no ahitana ireto fanomezam-pahasoavana nomen’ny Tompo ny mino fahizany ireto :
– fahafantarana fanahy samy hafa,
– fiteny samihafa tsy fantatra,
– fandikan-teny tsy fantatra.
Ny Galatiana 5.22-23 koa dia nilazan’ny Apostoly Paoly fa : « ny vokatry ny fanahy » dia :
– fitiavana, (l’Amour)
– fifaliana, (la Joie)
– fiadanana, (la Paix)
– fahari-po,(la Patience)
– fahamoram-panahy, (la Douceur)
– fanaovan-tsoa, (la Bienfaisance)
– fahamarinana, (la Justice)
– fahononam-po, (Maîtrise de Soi, contenance)